नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पौड्याल मोहका कारण सनराईज बैंकमा फेरि भाडभैलोः विवादकै कारण निरिह लगानीकर्ताहरुले २७ वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा कम ८.२५ प्रतिशत मात्रै लाभाशं पाउने ! - Aathikbazarnews.com नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पौड्याल मोहका कारण सनराईज बैंकमा फेरि भाडभैलोः विवादकै कारण निरिह लगानीकर्ताहरुले २७ वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा कम ८.२५ प्रतिशत मात्रै लाभाशं पाउने ! -
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा घिन लाग्ने काम राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुबाट भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । एउटा व्यक्तिका लागि मरिहत्ते नियमनकारी निकायले गरेपछि सनराईज बैंक भित्र फेरि भाडभैलो शुरु भएको देखिन्छ ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सधैं विवादमा फस्दै आएको बैंकको नाम हो सनराईज बैंक भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
भनिन्छ, जब ग्लोबल आईएमई बैंकबाट बर्हिगमन भए लगत्तै सनराईज बैंकको सीइओ जनक शर्मा पौड्याल बनेपछि सनराईज बैंक लिमिटेड भित्र एक पछि अर्को गर्दै सञ्चालकहरु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीचको विवाद सतहमै आयो र अझै फेरि विवाद उत्कर्समा पुगेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको निर्देशनमा बैंकका सञ्चालक बच्चराम तातेडको बारेमा अधिकार बाहिर गएर सीइओ पौड्यालले लफडा गरेपछि उनीको जागिर फेरि धरापमा परेको छ भन्दा फरक पर्दैन हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको (जनक) मोहकै कारण सनराईज बैंक भित्र भएको जनताको सम्पत्ती संकटमा फस्दै छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू ।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा २ वर्ष कार्यकाल छदै तलब र भत्तामा विवाद भएपछि राजिनामा दिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरा सनराईज बैंकका आईटी प्रमुख तिलक खतिवडाको धोती समातेर सनराईज बैंकको सीइओ जनक शर्मा पौड्याल बनेपछि बैंक भित्र भाडभैलो भएको देखिन्छ ।
भनिन्छ, प्रमोटर र शेयरधनीहरुलाई इतिहासमै करिब ९ प्रतिशत लाभाशं दिएर १ करोड ५० लाख भन्दा बढि तलब बुझ्ने सीइओ जनक शर्मा पौड्यालले सञ्चालककै बारेमा अधिकार बाहिर गएर सञ्चालक समितिमा केपी ओलीकै स्टाइलमा कुरा राखेपछि पछिल्लो विवादले उग्र रुप लिएको भन्दा फरक पर्दैन ।
एउटा व्यक्तिको पक्षमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै निर्देशनमा नियमनकारी निकायका प्रमुख भनौ वा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै लागे पछि सनराईज बैंकमा भाडभैलो भएके सञ्चालक मालचन्द्र तातेडले पंक्तिकारसंग बताए । उनीले दाबी गरे गर्भनरले पटक÷पटक जनक शर्मा (नालायक) सीइओलाई नहटाउन आग्रह गर्नु भयो । हाम्रो बैंकमा भित्रीरुपमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिसक्यो । नेतृत्व पठाउन मात्रै बाँकी छ नि उनीले दाबी गरे ।
निर्देशन आएपछि सञ्चालक समितिमा यस बारेमा जानकारी गराइएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थाका बारेमा ब्याख्या गर्दै समितिको संयोजक पद छाड्नु पर्ने धम्की दिएका थिए । यो एउटा जागिरे सीइओले सञ्चालकलाई ठाँडो निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन गर्भनर साब ? यसको उत्तर तपाईले नै हामी जस्ता निरिह लगानीकर्तालाई दिने पर्छ कि पर्दैन । सीइओ पौड्याल ठूलो कि हामी डिपोजिटकर्ता ?
भनिन्छ, एउटा विवादास्पद व्यक्ति सनराईज बैंकका सीइओ जनक शर्मा पौड्याललाई बचाउन राष्ट्र बैंक नेतृत्व किन लागि परेको छ अब चाहि यसको खोजी शुरु भएको छ । भनिन्छ, सञ्चालक तातेडको समिति संयोजक पद धरापमा परेपछि सनराइज बैंकमा लफडामा फस्यो रे, राष्ट्र बैंकले सम्झाएर पठायो रे यो कस्तो अचम्म गर्भनर साब ? तपाईलाई बैंकका सीइओ पौड्यालको माया छ कि जनताको डिपोजिटको प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको एउटा ब्यवस्थाले सनराइज बैंकमा फेरि भाँडभैलो सुरु भएको छ । यसको उत्तर नेपाल राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ? एकीकृत निर्देशको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी ब्यवस्थामा एउटा सञ्चालक एक कार्यकालभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउने छैन, भन्ने बुँदा थप गरेको छ ।
बैंकमा बच्चराज तातेड १२ वर्षदेखि मानव संसोधन समितिका प्रमुख छन्। निर्देशन आएपछि सञ्चालक समितिमा यस बारेमा जानकारी गराइएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थाका बारेमा ब्याख्या गर्दै समितिको संयोजक पद छाड्नु पर्ने धम्की दिएका थिए । यो एउटा जागिरे सीइओले सञ्चालकलाई ठाँडो निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन गर्भनर साब ? यसको उत्तर तपाईले नै हामी जस्ता निरिह लगानीकर्तालाई दिने पर्छ कि पर्दैन । सीइओ पौड्याल ठूलो कि हामी डिपोजिटकर्ता ?
सञ्चालक तातेडलाई भने राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था अर्को कार्यकालबाट लागू हुने देखिन्छ । यही विवादका कारण सञ्चालक समिति दुई भागमा बाँडिएको छ । तर, बैंक स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समिति अध्यक्षले भन्नुपर्ने कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले भनेका कारण पनि विवाद उत्पन्न भएको हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख प्रमुख देवकुमार ढकाल, निर्देशक किरण पण्डितलगायतले सञ्चालकहरुसँग किन लफडा भएको हो ? किन मिल्न नसकेको ? कारण आदिका बारेमा छलफल भएको भनेर सोधेका थिए रे । कारण के हो गर्भनर अधिकारीको (जनक) बचाउ अभियान भन्दा फरक पर्दैन अर्थमन्त्रीज्यू ।
को समितिमा बस्नेरनबस्ने, राष्ट्र बैंकको नियमलगायतका बारेमा कम्पनी सचिवले अध्यक्षलाई भन्छन्, त्यसपछि अध्यक्षले बोर्डमा त्यो बारेमा छलफल गर्छन्, स्रोतले भन्यो, सीइओले नबोल्दा हुने कुरामा बोल्दिँदा पनि समस्या भएको हो । बैंक स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले नै सीइओलाई बोर्डमा यस बारेमा कुरा राख्न भनेकाले सीइओ पौड्यालले श्री ३ महाराजको शैलीमा बोर्ड बैठकमा कुरा राखेको बुझिएको छ ।
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेको थियो भनिन्छ ।
सधैं छलफल गर्न र जनक बचाउन लाग्ने लानायक राष्ट्र बैंकलले ७० प्रतिशत जनताको लगानी रहेको डिपोजिटको हेक्का राख्नु पर्दछ कि पर्दैन अर्थमन्त्रीज्यू ? राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख प्रमुख देवकुमार ढकाल, निर्देशक किरण पण्डितलगायतले सञ्चालकहरुसँग किन लफडा भएको हो ? किन मिल्न नसकेको ? कारण आदिका बारेमा छलफल भएको भनेर सोधेका थिए रे । कारण के हो गर्भनर अधिकारीको (जनक) बचाउ अभियान भन्दा फरक पर्दैन अर्थमन्त्रीज्यू ।
यद्यपि तीन दिनअघि मात्रै सञ्चालक तातेड समूहले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो गुनासो दर्ता गराएका थिए । यसअघि पनि बैंकमा लफडा थियो । लफडका कारण प्रमुख कार्यकारी शर्मालाई राजीनामा गर्ने दबाबमा थिए। राष्ट्र बैंकका गर्भनर मार्फत नै जनकलाई बचाउ दबाब दिएपछि लफडा शान्त भएको देखिन्छ ।
सञ्चालक तातेडको पक्षमा शैलेन्द्र गुरागाइँ र मालचन्द दुगड छन् । अर्को पक्षमा मोतिलाल दुगड, शारदा शर्मा र दीपक नेपाल छन् । राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न पाँच जना सञ्चालक पुगेका थिए रे । सञ्चार माध्यममा बैंकका बारेमा समाचारहरु आउन थाले, के हो समस्या भनेर बुझ्न बोलाएका थियौं । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले पंक्तिकारसंग बताए । हामीले मिलेर काम गर्नुस् भनेर पठाएका छौं । उहाँहरु हुन्छ भनेर जानु भएको छ नि । उनीले दाबी गरे ।
बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९६ करोडको ५.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने छ । बाँकी २.४८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने छ । बोनस सेयर स्वीकृत भएपछि चुक्ता पुँजी ५२ करोड रुपैयाँले बढ्ने छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकले अबको १० दिनमा वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पुस २४ गतेको साधारणसभा नजिकिँदै जाँदा बैंकमा लफडा बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट मात्रै ८.२५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९६ करोडको ५.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने छ । बाँकी २.४८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने छ । बोनस सेयर स्वीकृत भएपछि चुक्ता पुँजी ५२ करोड रुपैयाँले बढ्ने छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
सीइओ जनक शर्मा पौड्यालले गर्तवर्षको नाफामा सिभिल बैंक भन्दा पनि कम करिब ८.२५ प्रतिशत लाभाशं दिँदै छन् । तर, उनीले १ वर्षमा १ करोड ५० लाख भन्दा बढि तलब भत्ता लिदै छन् भन्दा फरक पर्दैन । जनताको ७० प्रतिशत सम्पत्तीमा रजाई गरि करिब १ करोड ५० लाख तलब खाने अनि सबै बैंकमा विवाद गराउने र कोरोना अगाडी कमाएको नाफामा मात्रै ८.२५ प्रतिशत लाभाशं दिने सनराईज बैंकका सीइओ पौड्याललाई अब सनराईज बैंकमा बस्ने कुनै अधिकार छैन भन्नेहरुको पनि कमी छैन । सचेत भया ।